politika Fiarovana fiainan’olona – MedAid Academy
Ny teny hoe “Company”, “Company’s”, “Us”, “We”, “Our” dia manondro ilay orinasa voasoratra anarana Medical Aid International orinasa voasoratra anarana any Angletera sy Wales eo ambany laharana 7288956. Medical Aid International no Controller momba ny angon-drakitrao momba ny tanjon’ny lalàna GDPR 2018 (ny “Act”). Ny orinasam-pandraharahana ara-tsosialy dia miorina ao amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB. Ny teny hoe “tranokala” dia manondro ny anaran’ny sehatra http://www.medaid.co.uk ary ny atiny rehetra ao anatiny.
Rehefa mampiasa ny tranokalanay sy ny serivisinao ianao dia manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana ny mombamomba anao araka ny voalaza ato amin’ity Politika ity. Raha manova ny Politika sy / na ny fomba fanaovanay izahay dia havaozinay ity Politika ity mba hampahafantaranay anao ny momba izay angoninay, ny fomba fampiasanay azy ary amin’ny toe-javatra mety hanambaranay azy. Manentana anao izahay hanao tsoratadidy ity pejy Internet ity ary hijery ity Politika ity tsy tapaka. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia manazava ny fomba fijerinay sy ny politikantsika amin’ny fikarakarana ny angon-drakitrao. Amin’ny alàlan’ny fampiasana http://www.medaid.co.uk ianao dia manaiky an’ity politika momba ny fiainana manokana ity sy ireo fomba fanao hazavaina ao anatiny.
Ity politika ity dia miaraka amin’ny fampiasa ato aminay http://www.medaid.co.uk ary ny antontan-taratasy hafa resahina ao, dia mamaritra ny fototr’izay angon-drakitra manokana angoninay avy aminao, na omenao anay, dia ho zahanay. Azafady mba vakio tsara ity manaraka ity hahafantarana ny fomba fijerinay sy ny fanaonay momba ny angon-drakitrao manokana sy ny fomba hitondranay azy.
Azonao atao ny manome anay fampahalalana momba anao amin’ny alàlan’ny famenoana endrika ao amin’ny tranokalanay http://www.medaid.co.uk na amin’ny fifandraisana aminay amin’ny alàlan’ny telefaona, mailaka na mivantana ary amin’ny fomba hafa rehetra. Anisan’izany ny angona azonao omena anay rehefa misoratra anarana hampiasa ny tranokalanay izahay, misoratra anarana amin’ny serivisy fandefasana mailaka na mangataka fanazavana fanampiny.
Raha adidintsika ny mampahafantatra na mizara ny angon-drakitrao manokana mba hanarahana izay adidy ara-dalàna rehetra, na mba hampiharana na hampiharana ny fepetra sy ny fampiasa amin’ny http: //www.medaid.co.uk \_ termsandconditions sy fifanarahana hafa; na mba hiarovana ny zon’ny, ny fananana, na ny fiarovana ny Orinasa, ny mpanjifanay na ny hafa. Anisan’izany ny fifanakalozana vaovao amin’ireo orinasa sy fikambanana hafa ho fiarovana ny hosoka sy ny fihenan’ny trangan-trosa.